सुरक्षित रहन सबैमा शुभकामना (सम्पादकीय)
आश्विन २५, २०७८ कविता खड्का
कोरोना–कोरोना भन्दै अघिल्लो बर्षको दशैंमा मठ,मन्दिर, पार्टी पौवा र हरेक गाउँ घर चारै तर्फ सुनसान रह्यो ।
पहाड तराई जताततै पर्वको झल्को नआई गतबर्ष त्यसै बितेर गयो । यो बर्षको दशैंमा भने बल्ल अलि चहल पहल हुँदैछ । २०७६ चैतबाट नेपाल पनि कोरोनाको रापमा रापिएपछि गतबर्षका दशैं लगायतका चाडपर्व नीरस भएरै गए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था त छैन । पर्वको राप यो बर्ष निकै रापिदै अगाडी आइरहेको छ । बजार निकै भिडभाड भएका छन् । आम सर्वसाधारण मठ, मन्दिर, हाट बजारसम्म निशंकोच जान आउन थालेका छन् । मानिसको चारैतर्फ स्वतस्फूर्त रुपमा आवागमन बाक्लिएको छ । कोरोना कहर च्वाट्टै सकिएको जस्तो धेरैलाई प्रतित् भइरहेको देख्न सकिन्छ । तथापि कोरोना सकिएर यो परिवेश आएको भने होइन । वर्तमान परिवेश भनेको केही कोरोनाको संक्रमण मत्थर भएको मात्र हो । तर यसलाई आम मानिसले भने सकिए झैं गरी त्योे कोरोना पनि छ र ? भने जस्तो परिस्थिति सृजना गरेका छन् । हाट बजार, मठ, मन्दिर चारैतर्फ थेगी नसक्ने भीड बढेको छ ।
मानवीय गतिविधि बढ्नु नराम्रो कुरा पक्कै होइन । तर मानिसको नाक मुख छोप्ने गरी लगाउने जावी ( महला ) अर्थात माक्स धेरैको नाकमुखमा देख्न नपाइनु र सुरक्षाका मापदण्ड केही नअपनाई शहर बजारमा बढेको भीडले फेरि कोरोनाको त्रास बढाएको छ । संक्रमित फेला पर्ने र मर्नेको संख्या निमिट्यान्न नभएको अवस्थामा यस्ता प्रकारको हेलचेक्र्याई बढ्नु पुनः कोरोनालाई निम्तो दिनु सरह भएको छ । ुरोगलाग्नु पूर्व रोगको बाटो छेक्नु जातीु भन्ने उक्तिलाई पनि अहिले पालना गरिएको छैन । यसमा राज्यका नियमनकारी निकाय र स्वयम् आम नागरिक सबैको कमजोरी देखिएको छ । बजारमा एकअर्काको जीउ सहजै छुने गरी मानिसहरु मडारिएर हिड्न थालेका छन् । चाडपर्वले खुशीयाली ल्याउँछ । त्यो राम्रो कुरा हो । तर चाडवाडका नाममा भएको कमजोरी र लापर्वाहीले फेरि ठूलो विपत् निम्त्याउँने गरी क्षणिकको रमाइलो र खुशीलाई रमाइलो मान्न सकिन्न । यसमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले लाठी हानेर वा नियमनकारी निकायले नियन्त्रण नै गरेर बधुवा जनावर जस्तो मानिसलाई ऐंचेर नियन्त्रण गरिनु ठिक होइन । २१ औं शताब्दीका मानिस सभ्य र चेतनशील हुनु पर्नेमा वर्तमान कार्यशैलीले त्यो झल्कदैन । त्यसैले आम सर्वसाधारण हरेकले कोरोनाको महामारी जस्तो रोग फैलने कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ ।
मध्य नेपाल सन्देश फेरि पनि जोड दिएर भन्छ । परिवार र आफन्तमा नै चाडपर्व संस्कृति खुलेर मनाऔं । बाहिरी मानिसहरुसँगको आइजाई र बजार तथा मठ, मन्दिरमा हुने भीडबाट सकेसम्म टाढा बसौं । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोरोना सर्नबाट धेरै हदसम्म रोक्ने भनिएको माक्सलाई चिउँडो मुनी होइन नाक र मुख छोपिने गरी राम्ररी लगाएर मात्र बाहिर जानै परे हिड्ने बानी गरौं । यो बर्षको दशैंको शुभकामना यहि छ । जीउ रहे धेरै दशैं वा चाडपर्व मनाउन सकिन्छ ।
हामी हाम्रा विज्ञापनदाता, पाठक, शुभचिन्तक र सहयोगी तथा सल्लाहकार सबैलाई फेरि पनि सुरक्षित रही चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्दछौं । स्वस्थ्य व्यक्ति स्वस्थ्य परिवार अनि मात्र रमाइलो घरवार, विजया दशमीको सबैमा यहि शुभकामना ।
लक डाउनमा थलिएको पर्यटकीयस्थल र होटल व्यवसाय (भिडियो रिपोर्ट) गायत्री अश्वमेघ महायज्ञ वीरगंज |वृतचित्र लकडाउनमा शैक्षिक संस्था : कति पर्खने विद्यार्थी ! सुनसान डेस्क बोर्ड विद्यार्थीको पर्खाईमा | MN TV कोरोना महामारीमा स्वस्थ्य मुट्ट, खानपानमा सजग भए मुट्ट जोगाउन सकिन्छ : डा. राधा भट्टराई Birgunj Documentary (बृहतर वीरगंज परिकल्पना वृतचित्र) #Samata_School कैदी बन्दी जीवन विताईरहेका आमा बुवाका बालबालिकाको अवस्था #100_School
#कोरोना महामारी र चाडबाड #कोरोना विश्व महामारी
सोमवार, आश्विन २५, २०७८, ०३:१०:००
सम्पादकीय-प्राकृतिक घटना न्यूनिकरणमा सुस्तता
सम्पादकीय-पञ्चदलीय सरकार छ किसान हितमा ?
सम्पादकीय-खेलाडीसँग नेताहरुले सिक्नु पर्ने पाठ
भदौ २८, २०७८ कविता खड्का
सम्पादकीय–खुल्दै मन्दिरका ढोका
भदौ २४, २०७८ कविता खड्का